Kuva Yemagariro muWiricheya
Kukosha kwekuva nemagariro kune hwiricheya Users
Haufanire kushamwaridzana nevanhu vausingazive kana izvo zvichikuita kuti usagadzikane nekuti unogara uine shamwari dzako. Unganidza shamwari dzako mavhiki maviri ega ega kana pamwe pamwedzi uye unakirwe uye ushamwaridzane. Enda unodya kana kuenda bowling, chero chinhu munhu wese chaanobvumirana kuti aite nekuti zvinonyanya kunakidza. Mhuri inogona kuwira muchikamu ichi chekushamwaridzana nekuti ivo vanogona kwazvo kuita seshamwari kwauri. Izvo zvakare zvakakosha kugara uchisangana neshamwari dzako kuitira kuti usazviparadzanise uye ubude unofara navo.
Kana iwe uri ushamwari uye usine hanya nekutanga convo nemunhu wausina kusangana naye kana usingataure naye zvachose tanga kushamwaridzana naye vanhu vatsva unosangana kana wabuda. Rangarira, kana wanga uchichengeta pamwe nezvinyorwa zvedu ipapo uchave nezvakawanda zvekutaura nezvazvo, kana usingaendi verenga kana wapedza kuverenga izvi kuti zvikupe ruoko rwepamusoro. Kune nzvimbo dzakawanda uye nzira dzaungasangane nadzo uye kuita hushamwari nevanhu vatsva rondedzero yacho inenge isingaperi. Nzira iri nyore yekutaura nevasingazive inhau yemagariro uye kana iwe usina social media saka zviri nyore kwazvo kugadzira maakaundi. Zvese zvaunoda ndeimwe ruzivo rwekutanga uye email. Kutanga pano kukubatsira kuti unzwe kugadzikana uye pakupedzisira kukwanisa kutanga hurukuro nevanhu vausingazive. Imwe nzira ndeyekusangana neshamwari dzeshamwari uye wotanga kutandara navo kakawanda paunoona boka rako reshamwari. Kana iwe uine smartphone ipapo unogona kurodha maapplication akasiyana kuti akubatsire kusangana new vanhu uye tanga kuita shamwari.
Wheelchair Sanganai mapoka
Unogona kuwana meetup boka kuburikidza nevezvenhau senge Facebook peji kana webhusaiti. Kusangana uku kuchanakidza pane kusangana nemunhu wausingazive nekuti vanenge vari muwiricheya. Icho chatove chinhu chimwe chete chinofarira icho munhu wese anogovana uye zvirokwazvo ivo vachawanda. Kujoinha nharaunda yemawiricheya kunogona kukubatsira kuti uwane rutsigiro kana uine chero matambudziko. Mamwe mapoka anotopa mukana wekutamba mutambo uye kuwana zvishoma kushanda kamwe muvhiri kana kuita tsika. pano chinongedzo kune webhusaiti iyo inokubatsira iwe kuwana wiricheya sangana neboka munharaunda yako uye unogona kuzvibatanidza kana kuti unogona kutanga rimwe kana ukaona kuti vari kure kwazvo newe.
Ita chero chaunonyanya kugadzikana kuita uye tanga kugadzira itsva shamwari nekuti zvichadaro kuvandudza mweya wako uye manzwiro zuva nezuva. Kutanga nepamhepo kana iwe uchida kuti utange kusangana mumunhu mushure mekunge vatanga kuve shamwari yechokwadi. Kana vasingashandisi wiricheya zvino icho chinhu chakanaka nekuti ivo havana basa nenyaya yekuti iwe urimo wiricheya uye ndinofarira kuramba ndiri shamwari nemi. Shandisa pasocial media senge Instagram, Facebook, Twitter, uye zvimwe zvakawanda.
Chii Chaunofanira Kudzidza Paunenge Uri muWiricheya
Chiitiko Chero Munhu Akaremara Anofanira Kuenda